RIKOODHADII laga diiwaan geliyey guushii ay Man United ka gaartay kooxda West Ham ee Premier League… (Muxuu ka dhignaa kaarkii casaanka ahaa ee la siiyey Sofiane Feghouli?) – Gool FM
Haaruun January 3, 2017
(London) 03 Janaayo 2017 – Kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa guusheedii lixaad oo xiriir ah horyaalka Premier League xalay ka gaartay West Ham United oo ay booqatay, iyadoo uga soo badisay 2-0.
Sofiane Feghouli ayaa kaarka cas ka qaatay West Ham qeybtii hore ee ciyaarta, laakiin qeybtii dambe ee dheesha Man United ayaa labo gool la timid, waxaana u kala dhaliyey Juan Mata iyo Zlatan Ibrahimovic.
>- Manchester United ayaa hadda guuldarro la’aan ah (unbeaten) 13 kulan oo ay ciyaartay tartamada oo dhan, waana markoodii ugu dheeraa tan iyo bishii Maarso sanadkii 2013-kii, markaasoo aan 18 kulan dhinacooda dhulka la barin, waxaana hoggaaminayey markaas kooxda macallin Sir Alex Ferguson.
>- Kaarkii casaanka ahaa ee Sofiane Feghouli, kaasoo yimid 15-kii daqiiqo ee ciyaarta ugu horreeyey ayaa ah kaarkii guduudnaa ee ugu dhaqsaha badnaa ee la bixiyo Premier League xilli ciyaareedkan.
>- Juan Mata ayaa ku lug yeeshay 40 gool tan iyo markii uu kulankiisii ugu horreeyey u ciyaaray Manchester United, (25 gool waa uu dhaliyey, halka 15 gool ee kalena uu caawiyey), waxaa kaliya ka sarreeya Wayne Rooney oo 46 gool ku lug lahaa tan iyo markaas.
>- Man United ayaa guul gaartay 7 kulan oo xiriir ah tartammada oo dhan, waana rikoodhkiisa guuldarro la’aan ee ugu dheeraa macallin Jose Mourinho tan iyo bishii Maarso sanadkii 2013, markaasoo uu hoggaanka u hayey kooxda Real Madrid.
>- Zlatan Ibrahimović ayaa dhaliyey 18 gool 28 kulan oo uu ciyaaray tan iyo markii uu ku soo biiray Manchester United.
>- Tan iyo markii uu bilowday xilli ciyaareedkii hore, ma jirto koox ka dheesha Premier League ee qaadatay ama loo taagay casaan ka badan inta la siiyey kooxda West Ham oo ah 8 kaar oo guduudan.
>- Man United ayaa guul soo gaartay 3 kulan oo xiriir ah iyadoo ku ciyaaraysa meel ka baxsan garoonkeeda markii ugu horreysay, iyadoo uu hoggaaminayo tababare Jose Mourinho.
>- Man United ayaa haysata rikoodh fiican Premier League, marka ay iska garab ciyaarayaan labadeeda difaac ee Marcos Rojo iyo Phil Jones xilli ciyaareedkan, iyadoo aan laga adkaan Man United 9 kulan marka ay iska garab dheelayaan labadan difaac, kaliyana waxa ay barbaro galeen 3 kulan.
>- Kooxda Man United ayaan laga badin 15 kulan oo uu Michael Carrick u ciyaaray ama u safnaa xilli ciyaareedkan, kaliyana waxa ay barbaro galeen labo kulan, 37 gool ayey dhaliyeen mudadaas, waxaana kaliya laga dhaliyey 10 gool.
Arturo Vidal oo bixiyay qish wayn oo ah inuu ku biiri karo Chelsea....(Muxuu sameeyay??)